Ahoana ny fomba hampiasana ny maody fitehirizana bateria amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba fampandehanana ny maody Battery Saver amin'ny Apple Watch
Ignatius Room | | Apple Watch, Tutorials
Rehefa nampiditra ny Apple Watch i Apple tamin'ny Oktobra 2014, mpampiasa maro no nanontany tena raha mahazaka tanteraka ny andro iray be asa any am-piasana ny bateria. Rehefa tonga teny an-tsena izy dia hitantsika ny fomba nitan'ny rafitra fiasan'ny watchOS fanjifana batterie tsara loatra, saingy indraindray, indrindra amin'ny andro lava be dia lany bateria izahay. LNy maodely Apple Watch vaovao, Series 1 ary Series 2 dia manome antsika fahaleovan-tena bebe kokoa izany miaraka amin'ny processeur vaovao dia ahafahantsika miaritra andro fiasana mafy tsy misy olana, na dia ny 2 aza, indrindra amin'ny Series 2
Raha vantany vao lasa zatra manao famantaranandro indray isika dia hafahafa ny tsy mitafy azy eny an-tanantsika mba hahitana ny fotoana, zavatra iray izay efa nahazatra antsika tamin'ny fiankinan-doha amin'ny finday amin'izany. Raha mandeha ny ora dia hitantsika fa midina haingana be ny baterin'ny fitaovantsika na na dia fantatsika aza fa ho lava kokoa noho ny mahazatra ny andro fiasantsika fa te-hanohy hanana fotoana eo am-pelatanantsika isika, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny fampandehanana ny fifandraisana amin'ny famantaranandro ary mampiseho ny ora fotsiny izy io raha tsy misy fampandrenesana na inona na inona karazany.
Mamela ny maody fanaovana batery esory amin'ny famantaranandro ny fifandraisana rehetra ary asehoy ny fotoana fotsiny. Raha tsy izany dia azo alefa io maody io raha milatsaka hatramin'ny 10% ny bateria Apple Watch, fa azontsika atao koa ny mampihetsika azy amin'ny tanana. Raha te hampihetsika ny maody fitehirizana bateria dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto isika.
Ampandehano ny maody Apple Savera bateria
Voalohany dia mandeha any amin'ny Center Control an'ny Apple Watch izahay, mihetsiketsika hatrany ambany ka hatrany ambonin'ny efijery.
Tsindrio ny isan-jato izay mampiseho ny haavon'ny bateria ankehitriny.
Avy eo dia atsofotsofotsika ny rantsan-tananay eo amin'ilay kisary izay mampiseho ny fitsitsiana bateria hampiasana azy.
Hiseho ny efijery iray mampahafantatra antsika fa ho very ny fifandraisana amin'ny iPhone ary ny fotoana ihany no haseho. Mila tsindrio fotsiny ny hoe Araho mba hampavitrika azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba fampandehanana ny maody Battery Saver amin'ny Apple Watch
MarginNote Pro ho an'ny Mac, amin'ny antsasaky ny vidiny mandritra ny fotoana voafetra
Ny Apple Watch no smartwatch be mpividy indrindra eran'izao tontolo izao, mihoatra ny Fitbit